LibreOffice 7.1.2 Nharaunda Yekugadzirisa inogadzirisa zvinopfuura makumi matanhatu bugs | Linux Vakapindwa muropa
Handizive kana isu tichafanirwa kujaira kuwedzera kune yemunharaunda edhisheni tag nguva dzese patinotaura kune inozivikanwa kwazvo yemahara hofisi suite, asi ndozvinoitwa neThe Document Foundation. Iyo purojekiti, isingasviki mwedzi mushure vhezheni yapfuura, yazivisa nezvekutanga kwe LibreOffice 7.1.2 Nharaunda Yenharaunda. Uye isu tinofanirwa kuyeuka kuti ikozvino inopa sarudzo kumakambani ane rutsigiro rwakagadziridzwa, rwunosanganisirawo mabasa akasarudzika, chero bedzi ivo vachisarudza Enterprise sarudzo uye vachibhadhara kunyoreswa.
Tagged Nharaunda Edhisheni kana kwete, LibreOffice 7.1.2 ndiyo yechipiri yekugadzirisa yekuvandudza mune dzino dzakateedzana izvo asvika nokuti gadzirisa zvinopfuura makumi matanhatu bugs yakagoverwa mukati meese seti yekushandisa, ayo ari Munyori, Calc, Dhirowa, Impress Math uye Base. Izvo zvave zvichitsvakwa kwave kuita kuti suite iwedzere kuvimbika uye kugadzikana kuitira kuti tikwanise kushanda nerunyararo rukuru rwepfungwa, chimwe chinhu chakakosha mune yakasarudzika sarudzo nekuti haina kuratidzwa zvishoma.
LibreOffice 7.1.2 ndeyekuvandudza kupolisita suite
Iyo Gwaro Sisekelo yakagara ichipa sarudzo mbiri: imwe iine nhau dzese kune avo vedu vanoda zvese nekukasira uye imwe nekururamisa kune avo vanofanirwa kushanda zvakanaka. Zvekupedzisira, kana zvakanyanya kunyanya yezvikwata zvekugadzira, chirongwa ichi chinoramba chichikurudzira LibreOffice 7.0.5, yakaburitswa munaKurume 12.
LibreOffice 7.1.2 ikozvino iripo kubva kunovandudza webhusaiti yepamutemo, yatinogona kuwana kubva Iyi link. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kudhawunirodha suite mumapakeji eDEB, RPM kana kodhi yayo, asi pachezvangu ndingakurudzira kumirira kuti dudziro iyi iwoneke musoftware centre kana, muDebian / Ubuntu based distributions, wedzera yako repository nemurairo uyu:
Gare gare tinonyora sudo apt kugadzirisa && sudo apt kusimudzira kugadzirisa zvinyorwa uye kuisa mapakeji nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.1.2 Nharaunda Yekugadzirisa inogadzirisa anopfuura makumi matanhatu mabugs